Baaqyada Waxqabad - In kabadan Badhanno Kaliya Boggaaga | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 1, 2015 Khamiista, Oktoobar 1, 2015 Dustin Clark
Waad maqasheen hal-ku-dhigyada, halkudhigyada, iyo halkudhigyada suuqleyda meel walba ka soo galay: “Mawduucu waa boqor! ”Da’da macaamilku wado, moobiilku saaxiibtinimo, suuq geynta ku saleysan waxyaabaha dhijitaalka ah, maaddadu waa wax walba. Ku dhowaad sida caanka ah sida HubspotFalsafadda Suuq-geynta Inbound waa mid kale oo ka mid ah sababaha horyaalnimada: wicitaanka-ficilka ama CTA.
Laakiin waxaad ku deg degtaa inaad wax fudud ka dhigto oo ka hel websaydhka! ha dayacin ballaadhka waxa a wicitaan-ku-dhaqaaq runti waa. Waxay ka badan tahay uun badhan anfacaya - caqli ama haddii kale - kaas oo ku fadhiya emaylladaada, baloogyada iyo bogagga degitaanka oo u kaxeeyayaasha u geynaya meeshii aad dooratay.
Daabacaaddii ugu dambeysay, Tilmaamaha Suuqa ee Dhiirrigelinta Mawduucyada, Qaybta Saddexaad (loo-shaqeeyahayaga) wuxuu si faahfaahsan uga hadlay sida habka isku-dhafan ee warbaahinta - taas oo ah, adeegsiga warbaahin leh, kasbaday iyo lacag la siiyay - si kor loogu qaado waxyaabaha ay muhiim ugu tahay guusha maaddadaas. Ebook-ka, waxaan si faahfaahsan ugu sharraxnay sida boorarka CTA iyo badhamadu ay u yihiin qayb muhiim u ah warbaahinta oo loogu talagalay dhiirrigelinta.
Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo CTAs ah oo aan ahayn kaliya badhannada iyo boorarka. Akhriso si aad ubarato seddex tusaalooyin kale oo qarsoodi ah oo ah meesha aad ku farsameyn karto dilalka wicitaanada-ficilka si kor loogu qaado waxyaabahaaga.
Bixi si aad u ciyaarto
Maaha wax la yaab leh in warbaahinta lacag bixinta ay tahay hab wax ku ool ah oo indho cusub loogu helo waxyaabahaaga - hal tijaabo oo kantarool ah oo lala galo shirkadda caymiska caafimaadka, E3 waxay aragtay kororka taraafikada ku dhowaad 800% sababtoo ah kor u qaadista lacagta oo keliya! Laakiin maadaama ay suuqleydu sii wadaan qaadashada wadiiqooyinka lacagta lagu bixiyo - PPC, muujinta, dib u soo celinta iyo arrimaha bulshada - hal cunsur oo inta badan aan la hubin waa farriinta.
Qoraalkaaga xayeysiintu waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee dadaalkaaga lacagta lagu bixiyo - ha ahaato inay qoraal u diraan oo keliya xayeysiisyada raadinta ama soo bandhigaan farriimaha xayeysiinta. Oo ay ku jiraan luuqad ficil gaar ah - the akhri mores iyo dhagsii si aad u aragto - nuqul xayeysiiskaaga ah ayaa lagama maarmaan u ah soo-saar gujinta. Ka dib oo dhan, waa inaad heshaa guji xayeysiiska ka hor intaadan helin beddelka dalabka.
Taasi waa Meta
Waxaan ku jirnaa xilli aan iska indhatireyno astaamaha guud ee isticmaalaha ay maamusho, sida sharraxaadda meta, cinwaannada bogga iyo astaamaha cinwaanka. Kuma filna in Google uu si cad u qeexay sida uu u adeegsado calaamadahaas si uu u kala saaro websaydhadeenna, laakiin calaamadahaas badan ee la dayacay ayaa sidoo kale si qarsoodi ah waxtar ugu leh hagaajinta khibradaada isticmaale - iyo gujiskaaga.
[sanduuqa nooca = ”guusha” align = ”” class = ”” width = ”90%”]Sir: Isticmaalka saxda ah runti ma kobcinaayo calaamadahaaga SEO, laakiin maqnaashahoodu waa calaamad cad oo muujineysa in websaydhkaagu aanu daryeelin oo ay tahay in la iska indhatiro makiinadaha wax raadiya. [/ Box]
Ku dhowaad macmiil kasta iyo rajo kasta oo ka timaadda albaabkaaga ayaa leh hal dhibaato oo guud: xogtooda meta ayaa la jeexjeexay. Kala go'ay = seegay, aad u dheer, nuqul nuqul ama khalad caadi ah. Maxay arrintani u dhacday? Sababtoo ah waxay saameyn muhiim ah ku leedahay qiimeyntaada, taraafikadaada, iyo beddelkaaga.
Waan ogahay waxaad leedahay. Kaalay, nin yahow. Google waxay horeyba usheegtay inaysan u isticmaalin sharaxaada meta ee qiimeynta raadinta. Adiguna waad saxnaan lahayd. Laakiin waxa ay Google tixgelinayso waa guji illaa heerka laga soo qaado mashiinka raadinta ee boggaaga - iyo mid kaliya oo kaliya oo aad xakamayso ayaa ah cinwaannadaada meta iyo sharraxaadahaaga. Calaamadahaani waa wicitaano cad oo wax looga qabanayo rajadaada, booqdayaasha bogga iman kara iyo iibkaaga xiga.
Wali ma qancin? Tijaabi tan cabir ahaan - marka laga hadlayo macmiilka softiweerka ah, Element Three wuxuu kordhiyay heerka gujiska-dhex-dhexaadinta (CTR) ee Google illaa boggagooda 15% - kaliya adoo cusbooneysiinaya cinwaannada meta iyo sharraxaadaha. Intaas kuma eka - halkan waxaa ku yaal liistada 5 wadarta halbeegyada muhiimka ah ee lagu hagaajiyay kuwan oo keliya
Guji - hagaagtay 7.2%
CTR - hagaagtay 15.4%
Tirada booqdayaasha - hagaagtay 10.4%
Tirada booqdayaasha cusub - hagaagtay 8.1%
Heerka Kicinta - hagaagtay 10.9%
[sanduuqa nooca = ”note” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”]Casharka: Jooji dayacaadda calaamadaha websaydhka ee gacantaada - xitaa kuwa "meta" qarsoon. Waxay ku xiran yihiin Google. Waxay khuseeyaan adeegsadayaashooda. Waa inay adiga quseeyaan. [/ Box]
Dhacdada Bulshada ee Millennium-ka
Sirtu waxay ku jirtaa arrimaha bulshada - qoraallo sawirradu ku jiraan like badan iyo retweets badan kuwa aan lahayn.
Barnaamjiyada ugu dambeeya ee bulshada waxaa ku dhow gebi ahaanba sawir laga soo qaaday, laga bilaabo Instagram ilaa Tinder.
Laakiin intee in le'eg ayaad ku qaadataa ka dib markaad soo qaadatay sawirkii ugu fiicnaa ee farsameynta farriinta sidoo kale, sidoo kale, xariifnimo? Abuuritaanka deg-degga iyo waxqabadka qoraaladaaga warbaahinta bulshada waa lagama maarmaan, oo CTA si wanaagsan loo farsameeyay waa inay noqotaa bilow, ee ma ahan dhammaadka.
Tixgeli waxaad rabto inaad adeegsadayaashu sameyso, sida aad u rabto inay u sameeyaan, iyo goorta. Hubso inay ku habboon yihiin si uun - iyadoon loo eegin tirada astaamaha ee boostadaada.
Dabcan, waxaad ku abuuri kartaa ficil sawiradaada iyo fiidiyowyada, sidoo kale. Sawirrada alaabooyinka cusub, dadka xirmooyinka furaya, muuqaalo cusub oo dhalaalaya - liistadu way sii socotaa oo waxay u socotaa muuqaallo wax ku ool ah.
Fiidiyowgu wuxuu bixiyaa xitaa fursad dheeri ah oo aad naftaada uga iibiso rajooyinkaaga. Ku dar wicitaanno-ficil cad oo muujinaya calaamadaha fiidiyowga iyo macsalaameynta. U oggolow kuwa isticmaala inay ogaadaan inaad daryeesho, adigu halkaas ayaad diyaar u tahay inaad ka jawaabto.
Sare U Qaad Oo Adkee
Ugu dambeyntiina, xusuusnow inaad kujirto adduun guurguura. Fudud macnaheedu maahan nuxur yar - laakiin macnaheedu waa buuq yar oo u dhexeeya isticmaaleyaashaada iyo himilada ugu dambeysa. U adeegso wicitaanadaada waxqabad hore iyo badiyaa. Badanaa, waxaan aaseynaa badhamadeena, ereyada ficilada iyo lacag bixinta weyn ee bogga hoose.
Taabadalkeed, hubi in quid pro quo uu yahay hore iyo bartamaha - ama ugu yaraan ka laab laab laabashada. Fariintaada kusii hayso barta. Adeegso ficil ficil ah sida waxbarid, aqri, iyo wac, oo u tag hilibka dalabyadaada sida ugu dhakhsaha badan. Waad isticmaali kartaa oo waa inaad u adeegsataa tilmaamahan dhammaan tusaalooyinka kor ku xusan ee CTA - boorar, badhamada, raadinta lacag bixinta (dalab ka sareeya waxyaalaha yaryar - haddii aadan guuleysan, ma mudna in lagu tartamo…), soo bandhig iyo xayeysiisyada bulshada ee lacag bixinta ah, , fariimaha bulshada, iyo macluumaadkaaga meta.
Koobigaaga nuqul soo saar si aad u cabto, u siiso asaga ama ayada kor u qaadista ay mudan tahay, oo aad shaqo tagto - ereyadaada si fiican u isticmaal. Wicitaanadaada-ficilkaaga iyo macaamiishaadu dib ayey kuu jeclaan doonaan.
Tags: wac talaabobaaq wicitaan ah oo ficil ah
Dustin wuxuu u adeegaa sida hoggaanka istiraatiijiyadda dhijitaalka ah Qaybta Saddexaad, isagoo ka faa'iideysanaya khibradiisa ku saabsan ololeynta suuqgeynta internetka ee Fortune 500 iyo ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah si isku mid ah.
Oktoobar 2, 2015 at 5:05 AM
Thanks @marketingtechblog iyo @dustinclark talo aad u faa'iido badan. Ku raac gaar ahaan boggaaga faallooyinka xogta meta. Sidaad ogtahay xogtaada meta (tusaale ahaan shabakada sawirada) waa nambarkaaga xayeysiiska sumadda ee shabakadda oo laga daawado matoorada raadinta. Sidan oo kale waa in si fiican loo hagaajiyaa loona farsameeyaa sidii khudbad madaxweyne. 🙂 Sidaad sheegtay, shirkada badankeedu isnt sidaa darteed waxay noqonkartaa guul dhaqso leh. At Altaire waxaan la shaqeyneynaa suuqgeyaasha emaylka ololahooda emayl-ka ee Kirismaska ​​hadda oo aan ka caawinno diyaarinta iyo tijaabinta dhammaan dhacdooyinka. Laakiin haddii websaydhadu aysan diyaar u ahayn sidoo kale fursado waa lumin karaa. Xanuunku wuxuu u gudbiyaa talooyinkaaga.